Bohemian Long Sleeve Print Sawirta dhirta dhaadheer
$ 27.27 qiimaha joogtada ah $ 41.96
L / Buluug M / buluug S / buluug XL / Buluug L / Madoow M / Madow S / Madoow XL / Madoow L / Cawl M / Cawl S / Cawl XL / Cawl
Bohemian Long Sleeve Print Floral Hooded Sweatshirt - L / Blue gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Number Model: NH066-0536
Color: Buluug, Madoow, Cawlan
size Length isku dhaceen darafta
Fiiro: Fadlan u ogolow farqiga cm 1-3 in yar sababtoo ah qiyaasta buugga iyo kala duwanaansho midab yar oo loogu talagalay goobaha kala duwan. Fadlan si taxadar leh u raac shaxanka qiyaasta si aad u dooratid cabbirka. Ha u dooran sida tooska ah sida caadooyinkaaga.
Ku dalbaday in yar oo gabadheeda sanadka 12 ah. Wuxuu ku haboonaan doonaa si fiican. Maaha wax qaro leh sida dhididka ah Waxay u jeclaan doontaa